Fandaniam-bola any Frantsa ho an'ny vahiny: rafitra hetra, tranombarotra ara-panjakana, fiverenana hetra
Hetra ho an'ny vahiny any Frantsa
Posted by Tranquillus | Jona 25, 2018 | Mipetraka sy miasa any Frantsa
Ny olona rehetra mipetraka any Frantsa dia tsy maintsy mandoa vola hetra any Frantsa, ary na inona na inona ho zom-pirenena. Ny vola miditra aminy rehetra avy eo dia raisina ho isaina ho manisa hetra.
Hetra: trano fonenana any Frantsa
Ny hetra any Frantsa dia mitaky ny zom-pirenena Frantsay izay manana ny hetra any Frantsa, fa ny vahiny ihany koa amin'ny fepetra sasany.
Mamaritra ny fonenana hetra ho an'ny hetra
Hatramin'ny fomba fijery ny hetra, ary ny fametrahana ny trano fonenana ao Frantsa dia tsy maintsy manatanteraka fepetra sasany. Raha toa ka tanteraka ny iray amin'ireo fepetra ireo, dia raisina ho toy ny monina any Frantsa.
Ny toeram-ponenana mahazatra (na ny an'ny fianakaviana) na ny toeram-ponenana lehibe indrindra dia amin'ny faritany frantsay.
Ny fampiasana hetsika matihanina, nomena na tsia, tany Frantsa.
Ny ivon'ny tombontsoa ara-toekarena sy ny tombontsoa manokana dia ao Frantsa.
Vokatr'izany, ny iray dia tsy mifidy ny fonenan'ny hetra, fa avy amin'ny lalàna maromaro sy araka ny lalàna. Ny hetra tsy misy mponina any Frantsa dia hetraketraky ny karamany avy amin'ny loharano frantsay. Ny karama omena azy ho valiny ho an'ny asa amin'ny teny Frantsay dia aseho amin'ny fiverenan'ny hetra frantsay.
Ny ankamaroan'ny fifanarahana momba ny hetra iraisam-pirenena dia manome izay antsoina hoe fepetra misiona tsy maharitra. Ny mpiasa izay mijanona ambany kokoa noho ny 183 andro any Frantsa dia tsy iharan'ny hetra amin'ny vola miditra amin'ny fifandraisan'io asa io.
Ahoana no itoeran-ketra any Frantsa?
Ny hetra any Frantsa dia miorina amin'ny valisoa isan-karazany amin'ny trano hetra. Afaka avy amin'ny loharano samihafa izy ireo: karama, pensilihazo, hofaina, fidiram-bola, sns. Ny tranon'ny hetra dia mifandraika amin'ny mpandoa hetra sy ny vadiny, fa koa amin'ny zanany ambarany miankina. Avy eo, ny vola miditra ankapobeny isam-pianakaviana dia isam-bolana arakaraky ny isan'ny isa.
HAMAKY Inona no ilainao ho fantatra momba ny fialam-boly mitokana
Ao amin'ny fiverenana hetra, hizara iray isaky ny olon-dehibe sy ny antsasaky ny hizara ho an'ny ankizy miankina roa. Ny ankizy tsirairay avy amin'ny zanaka fahatelo dia mifandraika amin'ny anjara iray. Ny tahan'ny hetra napetraka dia miankina amin'ny haben'ny tokantrano sy ny fidiram-bola.
Ny ambaratongan'ny hetra mandroso dia apetraka eo anelanelan'ny 0 sy 45%. Any Frantsa, ny mpandoa hetra dia hetra amin'ny fidiram-bolany frantsay sy ny vola miditra any ivelany, na inona na inona zom-pireneny.
Fandaniana firaisankina amin'ny harena
Ny ISF dia haba natokana ho an'ny olona voajanahary izay manana tahiry mihoatra ny tokotany voafaritra ao amin'ny 1er Janoary. Ny olona izay manana ny sata ara-ketra ao Frantsa dia handoa ny ISF noho ny fananany rehetra any Frantsa sy ivelan'i Frantsa (araka ny fifanarahana iraisam-pirenena). Tsy azo ihodivirana ny fihenanam-bidy raha tsy misy fivoriambe iraisam-pirenena.
Ny olona izay tsy any Frantsa ny fonenany dia hetra amin'ny fananany any amin'ny tany frantsay ihany. Ireo avy eo dia fananana ara-batana azo mihetsika, fananana tsy mihetsika ary zo tena izy. Mety mahakasika ny fitakiana amin'ny mpitrosa iray any Frantsa ary koa amin'ny antoka navoakan'ny olona ara-dalàna manana birao voasoratra anarana any Frantsa, na avy amin'ny Fanjakana frantsay.
Farany, ny lisitra sy ny orinasan'ny orinasa sy ny orinasa ara-dalàna izay tsy voatanisa ao amin'ny tsenambola ary ny lisitr'izy ireo dia ahitana ny ankamaroan'ny zo sy ny fananana ara-barotra any Frantsa.
HAMAKY Fiarabe tany Frantsa
Hetra amin'ny olona mipetraka any Frantsa
Ny olona mipetraka any Frantsa ary ny toeram-ponenany any Frantsa dia tsy maintsy mamita sy mamita ny hetrany any Frantsa.
Ny rafitra hetra amin'ny frantsay
Ny olona tsirairay monina ao Frantsa noho izany dia hanana toe-javatra mitovy amin'ny an'ny mpandoa hetra frantsay. Ny vola azon'izy ireo dia hetra avokoa: fidiram-bola avy amin'ny loharano frantsay sy avy any ivelany.
Tsy maintsy misoratra anarana amin'ny biraon'ny hetra ireo mponina ireo. Vokatr'izany, raha mandoa hetra any Frantsa izy ireo, dia mahazo tombony koa izy ireo, toy ny fanodikam-bola sy fanomezan-dàlana isan-karazany omena ary ny fanomezan-dàlana hamantatra ny fandaniana azo antenaina amin'ny fidiram-bolan'izy ireo.
Ny fitondrana ataon'ny mpitondra vahiny
Mitranga izany fa tonga miasa any Frantsa ny mpitantana vahiny. Mandritra ny dimy taona dia tsy haba amin'izy ireo ny vola azony ao Frantsa. Ireo mpitantana matihanina voakasik'ity fepetra momba ny hetra any Frantsa ity dia:
Olona izay mazoto miasa aloha ary mitaky fahaizana manokana. Matetika ny sehatry ny fahaiza-manitikitika dia manana fahasarotana amin'ny famerenana any Frantsa.
Olona izay mampiasa vola ao amin'ny orinasa lehibe hatramin'ny 1er Janoary 2008. Mbola misy ny fepetra ara-bola sasany.
Mpiasa an-teroa nokaramaina avy any amin'ny orinasa iray monina Frantsa.
Ny mpiandraikitra sy ny mpiara-miasa dia miantso any ivelany mba hitazonana toerana ao amin'ny orinasa atsy Frantsa.
Ny fitondrana hetra ho an'ny "tsy manohintohina"
Ny fitakiana hetra ara-dalàna dia mihatra amin'ny olona izay mipetraka any Frantsa taorian'ny famoahana taratasy avy any amin'ny 1er Janoary 2008. Ny olona tsirairay izay mifindra monina any Frantsa dia mahita ny tambin-karama ampiasain'izy ireo mifandraika amin'ny fizarana vonjimaika dia tsy andoavana haba hatramin'ny 30%. Ity sanda ity dia afaka miakatra hatramin'ny 50% ho an'ny fidiram-bola sasany.
HAMAKY Manokatra tsipika laharana finday ary mahita mpandraharaha amin'ny aterineto any Frantsa
Ankoatra izany, ny harena ivelan'i Frantsa koa dia tsy manan-ketra amin'ny fandaniana mandritra ny dimy taona voalohany any Frantsa.
Na inona na inona toe-javatra misy azy, dia tsara kokoa ny mitady ny torohevitry ny manampahefana frantsay. Azony atao ny mamaritra ny sata mifehy ny hetra any an-tranon'ny vahiny izay tonga hipetraka any Frantsa. Azo atao ihany koa ny manadihady ny fifanekena momba ny hetra araka ny firenena niavian'ny firenena vahiny. Amin'ity tranga ity dia afaka manome valiny mahafa-po momba ny fepetra manokana amin'ny tsirairay ny consulat.
Ny olona tsirairay manana zo hetra any Frantsa dia tsy maintsy mandoa ny hetrany any Frantsa. Ny zavatra rehetra takiana dia ny hoe ny tranon'ny Frantsay (na ny fianakaviany) dia any amin'ny tany frantsay. Mety koa ny tombontsoany ara-toekarena na manokanaary koa ny asany matihanina. Ny vahiny izay mipetraka sy miasa any Frantsa dia tokony hiverina any Frantsa.
Hetra ho an'ny vahiny any Frantsa 7 martsa 2020Tranquillus
Teo alohaFepetra momba ny fidirana sy fepetra momba ny visa sy pasipaoro ao Frantsa
manarakaManorata ankizy ao amin'ny sekoly frantsay
Fiarabe tany Frantsa
Fiarovana ara-tsosialy sy zon'ny mpiasa napetraka any Frantsa
Ahoana no fiasan'ny vakansy karamaina?